ch 6 Luke – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaLuka / ch 6 Luke
6:1 Ke kaloku kwathi,, ngeSabatha owesibini, njengoko wacanda emasimini wokudla, abafundi bakhe eyahlula izikhwebu azidle, ngokuthi bezihlikihla ngezandla zabo.
6:2 Ke abaFarisi abathile bathi kubo, "Yini na ukuba nenze oko kungavumelekileyo ngesabatha?"
6:3 Kwaye benze, uYesu wathi: "Ngaba ukufunda le, into awayenzayo uDavide, xa walambayo, kunye nabo babekunye naye?
6:4 Okokuba wangena endlwini kaThixo, waza wathatha isonka esinikelwa, wadla, wanika nabo babenaye, nangona akukho mthethweni ukuba nabani na ukuba adle kuyo, ngaphandle kwababingeleli kuphela?"
6:5 Wathi ke yena kubo, "Kuba uNyana woMntu uyiNkosi, yawo noMhla woPhumlo. "
6:6 Kwathi ukuba, nangenye isabatha, wangena kwindlu yesikhungu, yaye wafundisa. Kwaye kukho apho umntu, owome isandla sakhe sokunene.
6:7 Baye ke bemlalele ababhali nabaFarisi waphawula ukuba wophilisa na ngoMhla woPhumlo, ukuze ngaloo ndlela bafumane indawo yokummangalela.
6:8 kodwa ngokwenene, yena ebezazi izicamango zabo, waza ke wathi kuloo mntu usandla somileyo, "Suka, umele phakathi." Esukile, wema ngxi.
6:9 Waza uYesu wathi kubo: "Ndiyanicela ukuba okuvumelekileyo ngesabatha kukwenza okulungileyo, okanye ukwenza okubi? Ukunika impilo kubomi, okanye kuchithwe?"
6:10 Kwaye kokubasingasinga bonke, Wathi omnye kwindoda leyo, "Yandisa isandla sakho." Yaye ke wazixolela. Kwaye isandla sakhe saphiliswa.
6:11 Ke bona baphambana ngumsindo, baza baxoxa omnye komnye, Intoni, ukuthi ngqo, ukuba bangamenza ntoni ngoYesu.
6:12 Kwathi ukuba, ngaloo mihla, waphuma waya entabeni, esiya kuthandaza. Waye ke umthandazo kaThixo kulo lonke ubusuku.
6:13 Yaye xa siguquka sifike, wabiza abafundi bakhe. Kwaye wanyula kubo balishumi elinababini kuzo (awathi kananjalo wabathiya elokuba ngabapostile):
6:14 sean, lowo limbi linguPetros, noAndreya, umzalwana wakhe, UYakobi noYohane, UFilipu noBhartolomeyu,
6:15 UMateyu Thomas, UYakobi ka-Alifeyu, noSimon ekuthiwa iTsha,
6:16 nekaJuda kaYakobi, noYuda Sikariyoti, ngubani ngumngcatshi.
6:17 Zisehla nabo, wema endaweni ethe tyaba ngobuninzi kubafundi bakhe, nenkitha enkulu yabantu, bevela kulo lonke elakwaYuda, naseYerusalem, lolwandle, kunye yaseTire neTsidon,
6:18 ababeze ukuze baphulaphule kuye ukuze baphiliswe kuzo izifo zabo. Kunye nabo babekhathazwa ngoomoya abangcolileyo, baye baphiliswa.
6:19 Kwaye ke isihlwele yonke wayezama ukumchukumisa, kuba amandla waphuma kuye, abaphilise bonke.
6:20 Wawaphakamisa amehlo akhe kubo abafundi bakhe, uthe: "Ninoyolo nina mahlwempu, ngokuba bobenu ubukumkani bukaThixo.
6:21 Ninoyolo nina ulambile ngoku, kuba niya kuhlutha. Ninoyolo nina nililayo kalokunje;, ngokuba niya kuhleka.
6:22 Hayi, uya kuba xa amadoda aya ndilithiyile kuwe, yaye xa aya ndanahlula wena zabakungcikivayo, kwaye ilahlwe phandle igama lenu ngokungathi ezimbi, ngenxa yokuba uNyana womntu.
6:23 Vuyani ngaloo mini, nigcobe. Ngokuba, yabonani, umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Kuba ezi zinto ezifanayo ooyise babo babesenjenjalo kubaprofeti.
6:24 kodwa ngokwenene, Yeha nina ucebile, ngokuba wena ube intuthuzelo yenu.
6:25 Yeha nina wonelisekile, ngokuba niya kulamba. Yeha, nina nihlekayo kalokunje!, ngokuba niya kukhedama nilile.
6:26 Yeha nina, xa abantu baya Siyanisikelela nina. Kuba ezi zinto ezifanayo ooyise babo babesenjenjalo kubaprofeti ababuxoki.
6:27 Kodwa ke mna ndithi kuni nivayo: Zithandeni iintshaba zenu. Yenza okulungileyo abo banithiyayo.
6:28 Basikeleleni abo baniqalekisayo, nibathandazele abo bathethe kuwe.
6:29 Nalowo uyanibetha esidleleni, mnike nesinye. Yaye ngubani nothabatha ingubo yakho, musa ukwala ingubo yakho.
6:30 Kodwa babele bonke Ndicele kuwe. Kwaye ungaceli kwakhona ngaye lokungxengxezela into eyeyakho.
6:31 Kwaye kanye njengokuba nawe ufuna abantu bakuphathe, ubaphatha nayo efanayo.
6:32 Kwaye xa nithe nathanda abo banithandayo, ninambulelo mni na ngenxa kuwe? Ngokuba naboni bayabathanda abo babathandayo.
6:33 Kwaye ukuba uya kukwenza okulungileyo kwabo benza okulungileyo kuni, ninambulelo mni na ngenxa kuwe? Kanjalo, naboni baziphathe ngale ndlela.
6:34 Kwaye ukuba uya ndiboleke kwabo ninethemba lokufumana, ninambulelo mni na ngenxa kuwe? Kuba naboni bayababoleka aboni, ukuze zifumane efanayo imbuyekezo.
6:35 ngokwenene, ngoko, zithandeni iintshaba zenu. yenza okulungileyo, lend, ningathembe lutho mbuyekezo. Kwaye ke umvuzo wenu uya kuba mkhulu, yaye niya kuba ngoonyana ophezulu, ngokuba yena enobubele kwabangabuleliyo nakongendawo.
6:36 ngoko ke, ube nenceba, kanye njengokuba naye uYihlo enenceba.
6:37 Musani ukugweba, kwaye niya ningasayi kugwetywa. Musani ukusingela phantsi, kwaye uya kusingelwa phantsi. Thethelela, kwaye uya kuxolelwa.
6:38 Nika, kwaye ke uya kunikwa nawe: isilinganiso esihle, icinezelwe phantsi ophalalayo nophuphumayo, baya kubeka phezu lengubo yakho. ngokuqinisekileyo, umlinganiselo enilinganisela ngawo, ukuba usebenzise ukulinganisa ngaphandle, uya kusetyenziswa ekujongeni kubuyela kuni kwakhona. "
6:39 Ke kaloku wathetha kubo omnye uthelekiso: "Yaz'ba ndingayithabathela njani na imfama ukukhokela imfama? Ngaba abayi zombini kweyela emhadini?
6:40 Akukho mfundi mkhulu kunomfundisi wakhe. Kodwa ngamnye uya ndifeze, ukuba abe njengomfundisi wakhe.
6:41 Yini na ukuba usibone udiza olukwiliso lomzalwana wakho, lo gama i-log iliso lakho, wena njengamakholwa?
6:42 Okanye njani na ukuthi kumzalwana wakho, 'Ubhuti, Ndivumele ndikhuphe udiza elisweni lakho,'Ngoxa wena musa ukubona log okwelakho iliso? bulu, kuqala susa log kwelakho iliso, yaye uya kwandula ke ubone ngokucacileyo, ukuze Uzalathise udiza olukwiliso lomzalwana wakho.
6:43 Kuba akukho mthi mhle leyo uvelisa isiqhamo esibi, kananjalo umthi embi kuvelisa iziqhamo ezihle.
6:44 Kuba umthi ngamnye waziwa ngesiqhamo sawo. Kuba amakhiwane emeveni, kananjalo aniqondi ukuba aqokelele kweediliya ukusuka ityholo kwiqunube.
6:45 Umntu olungileyo, ukusuka uvimba obulungileyo bentliziyo yakhe, linikeza okulungileyo. Nomntu okhohlakeleyo, ukusuka ngabalindi embi, linikeza okubi. Ngokuba ngokuphuphuma kwentliziyo, umlomo uthetha.
6:46 Kodwa kutheni undibiza, 'Nkosi, Nkosi,'Yaye ningazenzi izinto endizithethayo?
6:47 Nabani na oza kum, , aweve amazwi am, iwenze: Ndiya kutyhila kuni izinto afana.
6:48 Ufana nomntu owakha indlu, oye wemba kwaye sele usibekile isiseko phezu kolwalwa. ke, Kwathi, amanzi onogumbe abakho, umlambo besihla kuloo ndlu, yaye akazange akwazi ukuhamba kuyo. Kuba ibisekwe phezu kolwalwa.
6:49 Kodwa uwevileyo akawenza: Ufana nomntu owakha indlu phezu komhlaba, kungekho siseko. Umlambo indulumbane nayo, yaye kungekudala yawa phantsi, kwaye ukuwa kwaloo ndlu kwakukhulu. "
EyeThupha 23, 2019
EyeThupha 22, 2019
EyeThupha 21, 2019
EyeThupha 20, 2019
EyeThupha 19, 2019